ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးဖုန်း[သို.] Huawei ရဲ. Ascend P1S - ÄÑÐRÖÏÐ PÄLÄCE
wai phyo | 10:57 PM | Mobile News
Android Palace ဘော်ဒါတို.အနေနဲ. ဒီဖုန်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ်.မယ်...။ဒါပေမယ်. မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကို အခုဝင်ရောက်လာတဲ.အတွက် Huawei ပရိတ်သတ်များ အတွက် တက်သိသလောက် ကြော်ငြာ (အဲ) Share ပါရစေ။
Huawei က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ. Ascend P1Sဟာ ကမ္ဘာ. Smart Phone လောကကို ဂယက်ရိုက်သွားစေတဲ.ဖုန်းပါ...။Huawei လိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတခုက ထုတ်လုပ်တဲ.ဖုန်းပေမယ့် ဖုန်းမှာပါတဲ. Hardware နဲ. Operating System က ဒီဖုန်းကို အားလုံးက အံအားသင့်သွားစေခဲ.ပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ အထူဟာ 7.7 မီလီမီတာ သာရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို.ရနိုင်ပါတယ်။
GSM အမျိုးအစားဖုန်းဖြစ်ပြီး Operating System ကတော. Android ရဲ. version 4.0( Ice Cream Sandwich) ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း 8MP primary camera ကိုအသုံးပြုထားပြီး Full HD video တွေကိုပါရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အပြင် 1.3MP ရှိတဲ. secondary camera လဲ ပါဝင်ပါတယ်။ရိုက်ကူးထာ:
သော Video များကို HDMI cable ဖြင်.လဲ ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှု.နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ. processor က Dual-core 1.5 GHz Processor ဖြစ်ပြီး RAM 1GB ဖြစ်တဲ.အတွက် သုံးရတာ တော်တော်လန်းမှာပါ။
Storage ပိုင်းမှာတော့GB ပါဝင်ပြီး SD Card ကို 32 GB Storageထိ support ပေးထားပါတယ်။
ဖုန်းရဲ. အရောင်တွေအနေနဲ. Metallic black, Ceramic white, Soft pink ၃ရောင်ရနိုင်ပြီး Back Cover ကို အရောင်ငါးမျိုးထိ ရနိုင်ပါတယ်။
Android စနစ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ.အဆင်.မြင်.နည်းပညာသုံး ဖုန်း တစ်လုံးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ဈေးကွက်ထဲမှာ ၃၀.၆.၂၀၁၂ က ၃၂၀၀၀၀ ကျပ် ထိဈေးရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်လေ.လာဖို. အောက်မှာ specification ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။